बाह्रखरी विश्वकप फुटबलः कुन रंगशालामा हुँदैछ कसको प्रतिस्पर्धा ?
एजेन्सी । विश्व फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप फुटबल अाजबाट रुसमा सुरू हुँदैछ । रुसको राजधानी मस्कोमा विशेष कार्यक्रमका बीच फिफा विश्वकप फुटबलको उद्घाटन हुँदैछ ।फुटबलको महाकुम्भ भनेर चिनिने विश्वकपको उद्घाटनमा विश्वचर्चित सेलिब्रेटीको प्रस्तुतिसँगै ३२ राष्ट्रकै खेलाडी, प्रशिक्षक, अफिसियल तथा अतिथि उपस्थित हुनेछन् ।
पहिलो खेल रुस र साउदी अरेबियाबीच हुनेछ । आजदेखि करिब एक महिनासम्म चल्ने विश्वकपमा ३२ देश सहभागी हुँदैछन् । ३२ देशबीच ६४ वटा खेल हुनेछन् । खेल लिग कम नकआउटका आधारमा हुनेछ ।
रुसका विभिन्न १२ वटा रंगशालामा विश्वकप हुँदैछ । जसमा ७३६ जना खेलाडी प्रतिष्पर्धामा उत्रिँदैछन् ।
रसियाको राजधानी मस्कोस्थित लुज्निकी रंगशालामा हुने उद्घाटनमा विभिन्न स्थानीय साँस्कृतिक झल्किने नृत्य तथा प्रदर्शन हुनेछन् । भब्य हुने उद्घाटनमा ब्रिटेनका गायक रोबी विलियम्सले गीत गाउने छन् भने उनलाई रसियाकी गायिका सोप्रानो अइडा गारिफुलिनाले साथ दिनेछिन् । उद्घाटन समारोहमा ब्राजिलका चर्चित खेलाडी रोनाल्डो पनि दुई सेलिब्रेटीसँगै उपस्थित हुनेछन् । रोनाल्डोले २ पटक विश्वकपको ट्रफी ब्राजिललाई दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनी नै आजको उद्घाटनमा आकर्षणको केन्द्र बन्नेछन् ।
नेपाली समय अनुसार उद्घाटन समारोह ८ बजेर १५ मिनेटमा सुरु हुनेछ । उद्घाटन समारोह हेर्न करिब ८० हजार दर्शक आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
खेलकुद प्रेमीहरुको विशेष पर्खाइमा रहेको विश्वकप फुटबलको २१ औँ संस्करणमा ३२ राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सहभागी ३२ राष्ट्रलाई आठ समूहमा विभाजन गरिसकेको छ । विश्वकपको उद्घाटन खेलमा अाज लजनिकी रंगशालामा आयोजक रुसले एसियाली राष्ट्र साउदी अरेबियाको सामना गर्नेछ । पहिलो दिन उद्घाटन खेलमात्र हुनेछ । समूह चरणको अन्य खेल भोलिबाट हुनेछ ।
विश्वकप सुरू हुँदै गर्दा पछिल्लो समय विश्वकप आयोजना हुने रंगशालाको चर्चा चलेको छ । विश्वकपको लागि रुसले रंगशालाको तयारी कसरी गरिरहेको छ ? रंगशालाको अवस्था कस्तो छ ? दर्शक क्षमता कस्तो छ ? कस्तो प्रविधिमा रंगशालामा बन्दैछ भन्ने कौतूहल आम खेल प्रेमीहरुमा चासोको बिषय बनेको छ ।
यो पटक रुसले विभिन्न १२ वटा रंगशालामा विश्वकप खेलहरु आयोजना गर्दैछ । यो पटक १२ रंगशालामा ३२ राष्ट्रको ६५ खेलहरु संचालन हुँदै छ । विश्वकपका लागि भनेर रुसले ५ वटा नयाँ रंगशाला निर्माण गरेको छ । अन्य रंगशाला भने पुनर्निर्माण र विस्तार गरिएको छ ।
विश्वकप आयोजना हुने रंगशाला र खेल
रुसको यो सबैभन्दा ठूलो रंगशाला हो । राजधानी मस्कोमा अवस्थित यो रंगशाला बनाउन करिब ३५० मिलियन यूरो लागत लागेको थियो । यो रंगशाला विश्वकपलाई लक्षित गर्दै पुनर्निर्माण समेत भएको छ । यो रंगशालामा ८१ हजार दर्शक क्षमता रहेको छ ।
रुस भर्सेस साउदी अरेबिया
अन्तिम १६ अन्तर्गत समूह बि विजेता भर्सेस समूह ए उपविजेता
क्रेस्टोस्की रंगशाला (सेन्ट पिटर्सबर्ग)
रुसको यो दोस्रो ठूलो रंगशाला हो । यो रंगशालामा विश्वकपको तयारीको रुपमा सम्पन्न भएको कन्फिडेरेशन कपको फाइनल र केही समूह चरणको खेल सम्पन्न भएको थियो । सेन्ट पिटर्सबर्गमा रहेको यो मैदान सुविधा सम्पन्न रंगशाला हो ।
यो क्रेस्टोस्की रंगशालाको दर्शक क्षमता ६८ हजार १ सय ३४ रहेको छ । विश्वकपको लागि यो रंगशाला पूर्णरुपमा तयार भइसकेको छ ।
मोरक्को भर्सेस इरान
रुस भर्सेस इजिप्ट
ब्राजिल भर्सेस कोस्टारिका
अन्तिम १६ अन्तर्गत समूह एफ विजेता भर्सेस समूह ए उपविजेता
तेस्रो स्थानको लागि हुने खेल
फिस्ट ओलम्पिक रंगशाला
रसियाको सोचीमा अवस्थित यो फिस्ट ओलम्पिक रंगशाला लागतको हिसाबले पनि निकै महंगो रंगशाला हो । सन् २०१३ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको यो रंगशाला ४७ हजार ६ सय ५९ जना दर्शक क्षमता छ । तर, विश्वकपपछि भने यो रंगशालाको क्षमता ४० हजार हुनेछ । यो रंगशाला निर्माणका लागि करिब ७७९ मिलियन डलर लागेको छ ।
बेल्जियम भर्सेस पानमा
जर्मनी भर्सेस स्वीडेन
अन्तिम १६ अन्तर्गत समूह ए विजेता भर्सेस समूह बि उपविजेता
रसियाको एकाटरिनबर्गमा अवस्थित रहेको यो सेन्ट्रल रंगशाला निकै पुरानो रंगशाला हो । सन् १९५७ मा बनेको यो रंगशाला पटक पटक पुनर्निर्माण हुँदै आएको छ । विश्वकपको लागि लक्षित गर्दै सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य थालिएको छ ।
विश्वकपको लागि भनेर दर्शक क्षमता पनि बढाइएको छ । करिब ३५ हजार ६ सय ९६ जना दर्शक क्षमताको विश्वकपमा हुनेछ । विश्वकपपछि भने यो रंगशालाको दर्शक क्षमता २३ हजारको हुनेछ ।
इजिप्ट भर्सेस उरुग्वे
जापान भर्सेस सेनेगल
मेक्सिको भर्सेस स्वीडेन
यो रंगशाला रसियाको कजानमा अवस्थित छ । यो रंगशाला २०१३ सालमा खुला भएको हो । करिब ४५ हजार ३ सय ७९ दर्शक क्षमता रहेको छ । विश्वकपको लागि यो रंगशाला पूर्णरुपमा तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
फ्रान्स भर्सेस अष्ट्रेलिया
इरान भर्सेस स्पेन
पोल्याण्ड भर्सेस कोलम्बिया
दक्षिण कोरिया भर्सेस जर्मनी
अन्तिम १६ अन्तर्गत समूह सी विजेता भर्सेस समूह डी उपविजेता
ओक्रिटाई एरिना (स्पार्टक)
रसियाको राजधानी मस्कोको टुसिनो शहरमा अवस्थित ओक्रिटाई एरिना रंगशाला निकै आकर्षक डिजाइनमा बनेको छ । करिब ४३० मिलियन अमेरिकन डलर यो रंगशाला निर्माणमा लागेको छ ।
२०१४ देखि खुला भएको यो रंगशालाको दर्शक क्षमता ४५ हजार ३ सय ६० रहेको छ । यो विश्वकप फुटबलको लागि पूर्णरुपमा तयारीमा रहेको रंगशाला हो ।
अर्जेन्टिना भर्सेस आइसल्याण्ड
पोल्याण्ड भर्सेस सेनेगल
सर्बिया भर्सेस ब्राजिल
अन्तिम १६ अन्तर्गत समूह एच विजेता भर्सेस समूह जी उपविजेता
रसियाको कैलिनिङग्राडमा रहेको यो रंगशाला विश्वकपको लागि भनेर नै निर्माण गरिएको हो । विश्वकपमा यो रंगशालाको दर्शक क्षमता ३५ हजार २ सय १२ भए पनि विश्वकपपछि भने २५ हजारको हुनेछ ।
क्रोएसिया भर्सेस नाइजेरिया
सर्बिया भर्सेस स्विजरल्याण्ड
स्पेन भर्सेस मोरक्को
इंग्ल्यान्ड भर्सेस बेल्जियम
निज्नी नोव्गोरोड रंगशाला
निज्नी नोव्गोरोड रंगशाला नयाँ रंगशाला हो । विश्वकपलाई लक्ष्य गर्दै निर्माण गरिएको यो रंगशाला ४४ हजार ८ सय ९९ दर्शक क्षमता रहेको छ । यो रंगशाला उच्च प्रविधियुक्त रहेको छ ।
स्वीडेन भर्सेस दक्षिण कोरिया
इंग्ल्यान्ड भर्सेस पानमा
स्विजरल्याण्ड भर्सेस कोस्टारिका
अन्तिम १६ अन्तर्गत समूह डी विजेता भर्सेस समूह सी उपविजेता
कोसमोस एरिना रंगशाला रसियाको समरा भन्ने ठाउँमा छ । करिब ३२० मिलियन डलर लागतमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको यो रंगशाला निकै आकर्षक बन्नेछ । करिब ४४ हजार ९ सय १८ दर्शक क्षमता यो रंगशालाको हुनेछ । विश्वकपलाई लक्षित निर्माण गर्दै गरेको यो नयाँ रंगशाला हो ।
कोस्टारिका भर्सेस सर्बिया
उरुग्वे भर्सेस रुस
अन्तिम १६ अन्तर्गत समूह इ विजेता भर्सेस समूह एफ उपविजेता
रोस्टोभ एरिना यो रंगशाला पनि नयाँ हो । यो रंगशाला करिब ४५ हजार दर्शक क्षमता रहेको छ । निकै कलात्मक तरिकाले यो रंगशालाको निर्माण गरिएको छ ।
ब्राजिल भर्सेस स्विजरल्याण्ड
उरुग्वे भर्सेस साउदी अरेबिया
दक्षिण कोरिया भर्सेस मेक्सिको
आइसल्याण्ड भर्सेस क्रोएसिया
अन्तिम १६ अन्तर्गत समूह जी विजेता भर्सेस समूह एच उपविजेता
भोल्गोग्राडमा निर्माण भइरहेको भोल्गोग्राड एरिना रंगशालाको निर्माणको कार्य तिब्रगतिमा भई रहेको छ । यो रंगशालाको दर्शक क्षमता करिब ४५ हजार ५ सय ६८ रहेको छ ।
ट्युनिसिया भर्सेस इंग्ल्यान्ड
नाइजेरिया भर्सेस आइसल्याण्ड
साउदी अरेबिया भर्सेस इजिप्ट
मोर्डोभिया एरिना रंगशाला रसियाको सरान्स्क भन्ने स्थानमा रहेको छ । करिब ३०० मिलियनमा निर्माण भएको यो रंगशाला नयाँ हो । यहिवर्ष निर्माण सम्पन्न भएको यो रंगशाला निकै आकर्षक तरिकाले बनाएको छ । मोर्डोभिया एरिना रंगशालाको दर्शक क्षमता ४४ हजार ४ सय ४२ रहेको छ ।
पेरु भर्सेस डेनमार्क
इरान भर्सेस पोर्चुगल
पानमा भर्सेस ट्युनिसिया